Al Shabaab Oo Sheegatay Mas&apos;uuliyadda Qarax lagu dhaawacay Sarkaal katirsan CID-da.
Dhageyso: Mas&apos;uul Katirsan Wasaaradda G/dhigga Oo Ku Jees Jeesay Ciidamada Mushaar la&apos;aanta ugadooday.
Wednesday September 19, 2018 - 19:11:41 in Wararka by Super Admin
Xalay saqdii dhexe ayay diyaarado dagaal waxay duqeymo ba&apos;an ugeysteen xarumo rayid ah oo kuyaal magaalada Saakoow ee gobolka Jubbada dhexe Koonfurta dalka Soomaaliya.
waa Meydadka Carruur lagu gummaaday duqeyntii Saakow
Duqeymaha ayaa lagu kala beegsaday isbitaalka guud ee degmada iyo Kolleej carruurta lagu xanaaneeyo waxna lagu baro.
Wariye ku sugan Saakoow ayaa soo sheegay in burbur xooggan uu gaaray dhismayaasha ay diyaaradaha dagaal beegsadeen, duqeynta ka dhacday isbitaalka guud ee magaalada wax khasaara nafeed ah kama dhalan balse duqeynta ku dhacday Kolleejka carruurta lagu xanaaneeyoa waxna lagu baro waxaa ku dhintay sedax carruur ah.
Saaka markii uu waagu Baryay ayay boqolaal qof waxay gaareen goobaha la duqeeyay iyagoona Kolleejka kasoo daabulay Meydadka sedaxda carruurta ah ee dhimatay, isbitaalka guud ee degmada Saakoow ayaa maalin walba adeegyo caafimaad u fidin jiray boqolaal qof waana isbitaal Maxalli ah oo dabooli jiray baahida caafimaad ee dadka ku dhaqan gudaha magaalada iyo deegaannada hoos yimaada.
Goob joogayaal ayaa sheegay in xalay ay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay gantaallada ay diyaaradaha shisheeye ku garaacayeen xarumaha shacabka magaalada Saakoow, inta badan duqeymaha ka dhaca gobollada Jubbooyinka iyo Gedo waxaa geysta dowladaha Mareykanka iyo Kenya.
dhinaca kale dowladda Federaalka ayaa sheegtay mas&apos;uuliyadda gummaadki Saakoow, Aadan Isaaq Cali oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta ee DFS ayaa warbaahinta u sheegay in duqeyntaas lala eegtay dad ka tirsan Al-Shabaab.
Madaxda DFS oo aan badanaa lala socodsiinin duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo Kenya ka geystaan wadanka ayaa dhowr jeer ku hor fadeexoobay dadka Soomaaliyeed kadib markii ay dusha u riteen mas’uuliyadda duqeymo ay dowladaha shisheeye ku laayeen dad shacab ah sida weerarkii Bariire ee lagu xasuuqay dadkii Beeraleyda ahaa taas oo ay DFS ku sheegtay in lagu beegsaday dad ka tirsan Al-Shabaab.
Sidoo kale madaxda dowladda Federaalka ayaa dhowr jeer sheegtay duqeymo dad Soomaaliyeed lagu gummaaday oo diyaaradaha dowladda Kenya ya geysteen gobollada Gedo iyo Kenya.
Hoos ka daawo sawirada dadkii lagu dilay duqeyntii Saakoow iyo burburka Isbitaalkii degmada ee u adeegayey dadweynaha.